Chalet kunye spa Les Retrouvailles CITQ 302928
Indlu yelizwe enomtsalane ene-spa, yalungiswa ngo-2020, entliziyweni yelali entle eUpper Laurentians. Umda wamanzi kunye neentaba, indawo efanelekileyo yemisebenzi yangaphandle, i-cocooning okanye i-telecommuting kude nesixeko. 1h15 ukusuka Ottawa / Gatineau kunye 2h40 ukusuka Montreal. Iikhilomitha ezili-100 zamanzi okuhambahamba kuwo, idokhi kawonke-wonke egqibeleleyo ekungeneni kwakho kunye nokubanakho ukurenta. Iipaki, iilwandle, imidlalo yamanzi, indlela yokuhamba intaba, indawo yokudlala, umkhondo wemoto yekhephu, i-skating rink kwaye ilungele ukuzingela nokuloba.
Yonwabela uxolo olunoxolo nabo bonke ubumnandi bekhaya.
Ivulekile, ihlalisa ngokukhululekileyo ubuncinane abantu abali-10.
** Nceda ufunde kude kube sekupheleni phambi kokuba wenze ugcino lwakho **
I-spa ivula unyaka wonke.
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, izinto ezininzi, isitya sokuhlamba izitya, imicrowave, ifryer yomoya, umenzi wekofu, umatshini weNespresso virto.
Igumbi lokutyela elinetafile enezihlalo ezili-10.
Iwasha / isomisi onakho.
I-propane BBQ ifakiwe de udinwe.
IiTV ezi-2 ezihlakaniphile ezinentambo yesathelayithi eneShaw.
Ukubanakho ukongeza iakhawunti yakho yeNetflix.
Amagumbi okulala ama-3 avaliweyo anebhedi yendlovukazi kunye nendawo evulekileyo 2 ekhululekile kakhulu engatshatanga kwiibhedi eziphindwe kabini kunye neebhedi eziphindwe kabini zesofa ezi-3.
Ibhedi kunye neetawuli zibandakanyiwe.
Ibhiliyoni kunye netafile yomdlalo weping pong, imidlalo yevidiyo kunye nemidlalo yebhodi emininzi.
Indawo yomlilo yangaphakathi kunye neziko langaphandle.
Izigodo ezimbalwa zibandakanyiwe kude kuphele.
Kumgangatho ophambili ligumbi lokuhlala, ikhitshi kunye negumbi lokutyela, igumbi lokuhlambela elineshawa kunye nebhafu kunye namagumbi okulala ama-3.
Kumgangatho ongaphantsi, indawo enkulu evulekileyo enebhedi ezi-2 zabantu abangabodwa phezu kwebhedi ezimbini, itafile yemidlalo, iibhedi ezi-3 zesofa, indawo yomlilo kunye nomabonakude.
Igumbi lokuhlambela elineshawa.
Igumbi elinewasha / isomisi kunye nezixhobo ezininzi zemidlalo ezifana nezityibiliki ezingaphakathi, iirakethi zentenetya ezinebhola, iirakethi ze-badminton ezineshuttlecocks, ibasketball, ibhola ekhatywayo kunye nevolleyball. Izityibilizi zomkhenkce, izihlangu zekhephu kunye “nekhaphethi ephambeneyo”. Le ndlu iphambi kwepaki, ibala lentenetya, ibala lebhola yomnyazi, ibala lebhola ekhatywayo kunye neqonga lokudlala lamanzi kunye ne-ice rink ebusika.
Ukuba nokwenzeka kwerenti yokukhwela iinqanawa kwiindawo ezininzi.
Intendelezo enkulu yangaphandle inegazebo evaliweyo enetafile yokutya kunye nezitulo. Ifenitshala yasegadini. Indawo yomlilo enezigodo. I-Spa (ufakelo lukaJuni 2021).
Ukukwazi ukumisa intente yethu kubantu abayi-8 ukuya kwabayi-10 ngamava okulala phantsi kweenkwenkwezi.
Akutshaywa ngaphakathi kwaye nceda uchole naziphi na iziphelo zecuba kunye nenkunkuma ngaphandle.
Akukho matheko avunyelweyo njengoko indawo izolile kwaye ihlonipha ubumelwane.
Siyakucela ukuba unciphise ingxolo yangaphandle kwaye uqinisekise ukuba awungxoli emva kwentsimbi yeshumi elinanye ebusuku.
Uyaqonda ukuba kusenokubakho imingcipheko eyayanyaniswa nezinto ezininzi ozenzayo kwisiza sakho. Wamkela uxanduva olupheleleyo ekugcineni le propati kuyo nayiphi na ingozi emzimbeni ngenxa yemisebenzi yakho kwaye ubambe umniniyo engenabungozi.
Uyaqonda ukuba yonke imisebenzi inokuzisa umngcipheko kubantwana abangajongwanga ngononophelo.
Uyawamkela kwaye uwayeke onke amabango avela ngenxa yokwenzakala kwizakhiwo zePropati.
Bonke abakhenkethi bakwa-Airbnb kwiqela lam bayavuma yaye bayavuma ukuba basifundile yaye basiqonda esi sibhengezo yaye bayavuma ukuba esi siqinisekiso singezantsi yinxalenye yesivumelwano esibophelelayo nesinyanzeliswayo phakathi kwabahambi bakwa-Airbnb kunye no-Airbnb.
I-HDTV ene-I-Apple TV, izitishi zeTV eziqhelekileyo, I-Netflix
Ilali enomtsalane enabemi abangaphantsi kwama-800, enomda weekhilomitha ezili-100 zamanzi okuhamba ngenqanawa.
Iivenkile ezi-2 eziluncedo, indawo yokutyela ngasemanzini.
Iipaki ezininzi kunye neendlela.
Intaba kumgama ozinyathelo ezimbalwa.
I-ice rink phambi kwendlu ebusika kunye nemidlalo yamanzi ehlotyeni.
Sihlala sinakho konke malunga nayo nayiphi na imibuzo.
Sithetha isiFrentshi, isiNgesi nesiTaliyane.
Inombolo yomthetho: 302928
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Notre-Dame-de-Pontmain